5 ဂိမ်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွင်းရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
ဂိမ်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း ၃ ခုသည်အကန့်အသတ်မရှိရောင်းရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်
ဟိုဆေး Alfocea | | အရောင်း
ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ပါ၊ များစွာသောမင်းဟာအလုပ်ကနေအနားယူပြီးပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေအများကြီးရပြီးသားပါ။ သို့သော်အခြားသူများကမူဆက်လက်လှုပ်ရှားရန်အချိန်နှင့်အမျှအနားယူရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအယနေ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများကြီးသူတို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းကမ်းလှမ်းမှုများကယူပေမယ့် အမေဇုံချုပ်နေ့အမှန်တရားကတော့ App Store မှာကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။
နေ့တိုင်းအဖြစ်, အကောင်းတစ်လက်တဆုပ်စာ ဂိမ်းနှင့် applications များအခမဲ့သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းအပေါ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone, iPad နဲ့အတူပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့အထူးလျှော့စျေးအချို့နဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုယူဆောင်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အိမ်ထဲမှကလေးငယ်များကိုစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကန့်သတ်အချိန် သူတို့ဘယ်တော့မှရရှိနိုင်တော့မည်ကိုမသိပါ။ အထူးလျှော့စျေးမှအကျိုးခံစားရရန်၎င်းတို့ကိုအမြန်ဆုံး download လုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်.
3 Fiete ပွဲစဉ်
4 Monsters လည်းခံစားချက်တွေကိုရှိသည်!
ကောင်းပြီ၊ အားလပ်ရက်အချိန်တွေရောက်နေပြီးကလေးတွေကအိမ်တွေကိုကျူးကျော် ၀ င်လာတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်တွေသင်ယူနိုင်မယ့်ဂိမ်းများနှင့်လျှောက်လွှာများကိုအခမဲ့သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းဖြင့်စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့နှင့်အတူအကောင်းတစ် ဦး အချိန်ပေးပါ။
ဤဂိမ်း၏ပထမ ဦး ဆုံး "ပျော်စရာနံပါတ်ဂိမ်းများကိုပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများ" ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူငါသည်သင်တို့ကို၎င်း၏အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်။ သံသယများစွာရှိသည်ထင်ကြဘူး။ အကြောင်းပါ ကလေးတွေရေတွက်ဖို့သင်ယူပါလိမ့်မယ်နှင့်အတူပျော်စရာဂိမ်း။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ထိသောအခါနံပါတ်များကိုနားထောင်နိုင်ပြီး၊ အရာဝတ္ထုများကိုရေတွက်။ ၎င်းတို့ကို၎င်းတို့နံပါတ်နှင့်အခြားများစွာတို့ဖြင့်ဆက်စပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အခက်အခဲများစွာရှိသည်။
၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ ၄.၄၉ ဖြစ်ပြီးယခုတွင်သင်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရှင်းနေသည်မှာကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းခေါင်းစဉ်များကိုရွေးချယ်သူမဟုတ်ကြောင်း၊ သူတို့သည်ဘာသာပြန်များတွင်အနည်းငယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းထင်ရှားသည်၊ သို့သော်အဆုံး၌အရေးကြီးဆုံးမှာအကြောင်းအရာနှင့်ဤဂိမ်းနှင့်အတူအိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ပျော်စရာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုပဟေlesိများမှတဆင့်တိရစ္ဆာန်များစွာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိမ့်မည်.
၎င်း၏ပုံမှန်ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၃.၄၉ ဖြစ်ပြီးယခုတွင်သင်အခမဲ့ရနိုင်သည်။
« Fiete Match »သည်ပျော်စရာကောင်း။ ပျော်စရာကောင်းသည် မှတ်ဉာဏ်ဂိမ်း သောကလေးများသည်ဤ«စစ်မှန်ပင်လယ်ခြင်္သေ့»စိန်ခေါ်နှင့်အနိုင်ယူရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ Bull's-eye box ရဲ့နောက်ကွယ်မှာမှတ်ဉာဏ်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုပါ။ သင်ကဒ်များကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေရလိမ့်မည်။ သင်ခုနစ်ခုသည်မှန်ကန်သည်၊ မဟုတ်ပေါ်တွင် မူတည်၍ ခုနစ်ခုသည်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဟေးသူကသိပ်ကြာကြာမစောင့်ချင်ဘူး။
အင်္ဂါရပ်တွေ မှတ်ဉာဏ်နှင့်ယုတ္တိဗေဒကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအခက်အခဲအမျိုးမျိုး လှပသောလက်သရုပ်ဖော်ပုံများမှတဆင့်။
Fiete ပွဲစဉ် ပုံမှန်ဈေးနှုန်းကတော့ယူရို ၂.၉၉ ပါ။ အခုတော့ယူရို ၁.၉၉ နဲ့ရပါတယ်။ မြန်မြန်လုပ်ပါ!
Fiete ပွဲစဉ်€ 3,99
"Monsters လည်းခံစားချက်တွေကိုရှိသည်။ " ဒီရဝုဏ်အောက်မှာဒီ ချစ်စရာကောင်းမိကျောင်းသရုပ်ဆောင်ပျော်စရာဂိမ်း မင်းသမီးလေးကိုကယ်တင်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အိမ်ထဲရှိကလေးငယ်များကိုပါအာရုံစိုက်စေခဲ့သည်။
အရင်စျေးကယူရို ၀.၄၉ သာရှိပေမယ့်အခုတော့အခမဲ့လည်းရနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကလေးတွေဂိမ်းကိုစွန့်ခွာပြီးခုန် Percolator, သင်တတ်နိုင်သမျှနှင့်အတူအလွဓာတ်ပုံတည်းဖြတ် app ကို သင်၏ရုပ်ပုံများကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော“ ရောင်စုံရောင်စုံပန်းချီကားများ” အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ။ ထိပုတ်ပါရုံ၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်သင်၏ထူးခြားသောဖန်တီးမှုများကို Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်။
၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာယူရို ၃.၄၉ ဖြစ်ပြီးယခုတွင်သင်သည်ယူရို ၁.၀၉ ဖြင့်သာရရှိနိုင်သည်။
NOTA: အားလုံးယခင်ကမ်းလှမ်းမှုများမှာ ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ရရှိနိုင်။ ဆိုလိုသည်မှာ အိုင်ဖုန်းသတင်း ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာမူကိုထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင်၎င်း၏တရားဝင်မှုကိုသာအာမခံနိုင်သည်။ ချွင်းချက်များအနေဖြင့် developer များသည်ကမ်းလှမ်းမှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးသောအခါဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်း၎င်းကိုမသိရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်မှာသင်စိတ်ဝင်စားသောအရာများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်ပြီးပရိုမိုးရှင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုပေးဆောင်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါကပုံမှန်ယန္တရားမှတဆင့်ငွေပြန်အမ်းငွေတောင်းခံနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » အရောင်း » ဂိမ်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း ၃ ခုသည်အကန့်အသတ်မရှိရောင်းရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်
အမေဇုံသုံးဆောင်သူများအတွက် Apple ရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးအရောင်းအဝယ်